विद्यालयमा देखियो कोरोना – Dainik Lumbini
अभिभावक भन्छन्– सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै वार्षिक परीक्षा तत्काल सकेर विद्यालय केही समय बन्द गरौं ।
रूपन्देहीका विद्यालयहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । संक्रमण देखिएपछि कतिपय विद्यालय बन्द गरिएको छ ।
यस क्षेत्रमै धेरै विद्यार्थी रहेको बुटवलको कालिका मानवज्ञान मावि बन्द गरिएको छ । शिक्षकहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान माविको पठनपाठन बन्द गरिएको हो । गतसाता भारतका विभिन्न स्थानको शैक्षिक भ्रमण गरी फर्किएका विद्यालयका शिक्षकहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । बुटवल उप–महानगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा महाशाखाका प्रमुख मित्रमणी खनालले बैशाख २ गतेसम्मको लागि विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरिएको जानकारी दिए । खनालले भ्रमणमा गएका शिक्षकहरूमध्ये सात जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गत शुक्रबारदेखि नै विद्यालय बन्द गरिएको जानकारी दिए । विद्यालयबाट प्रधानाध्यापकसहित करिब एक सय जना शिक्षकहरू शैक्षिक भ्रमणको लागि भारत गएका थिए । तिमध्ये सात जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र अरू शिक्षकहरू पनि होम आइसोलेसनमा रहेको उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै बुटवल १२ ढवाहस्थित ग्लोबल पिस पार्कमा रहेका ब्रम्हाकुमारीहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । पिस पार्कमा रहेका चार जना ब्रम्हाकुमारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पिस पार्क समेत बन्द गरिएको हो । उनीहरूपनि यसै साता भारतको विभिन्न स्थानमा पुगेर बुटवल फर्किएका थिए ।
पछिल्लो साता रूपन्देहीलगायतका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जान थालेको छ । सोमबार मात्रै बुटवल कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमा भर्ना भएका ३ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म जिल्लामा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या १ सय ५७ पुगेको छ । त्यस्तै सोमबार थप ३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसंगै हालसम्म कोरोना संक्रमण देखिएकाहरूको संख्या नौ हजार दुई सय ५६ पुगेको छ भने आठ हजार नौ सय ७८ जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् ।
परीक्षा गर्न माग
कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्षको वार्षिक परीक्षा प्रभावित भएको थियो । पठनपाठन समेत अवरूद्ध भए । अभिभावकहरूले संक्रमण फैलन नपाउँदै परीक्षा सक्न आग्रह गरेका छन् । ‘विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा रोक्नु हुँदैन, छिट्टै गर्नुपर्छ ।’– अभिभावक जीवन कार्कीले भने ।
अन्तिम परीक्षा सकिएपछि अनलाइनबाटै भए पनि कक्षा चलाउन सकिने अभिभावकको विश्वास छ । तर निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यालय बन्द गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।
स्थानीय सरकारले भने वार्षिक परीक्षाको मिति समेत तय गरेका छैनन् । पालिका अनुसार परीक्षा गर्ने गरिएको छ । यो संकटका बेला विद्यालयलाई नै परीक्षा आफ्नो अनुकुलमा गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
बुटवलमा मापदण्ड तय
पछिल्ला केही दिनयता कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बुटवल उप–महानगपालिकाले कोरोनाजोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । कोरोनाको पुरानै र नयाँ प्रजातिसमेतको भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य सावधानीसहितको नयाँ मापदण्ड अपनाएर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जोखिममा रहेको समुदायलाई नै पहिल्यै सुरक्षित बनाउने र समुदाय स्तरमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले शैक्षिक संस्था सञ्चालनको नयाँ मापदण्ड बनाएर निर्देशन गरिएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए । बालबालिकालाई जोगाउने र उनीहरूलाई नै परिवार हुँदै समुदायमा सन्देश वाहक दुतका रूपमा पनि परिचाल गर्नेगरी योजना बनाइएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।
उप–महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम् शिक्षा,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले विद्यालय, शिक्षक र अभिभावक समेतलाई अलग अलग मापदण्ड बनाएर निर्देशन जारी गरिएको बताए ।
उप–महानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक र संस्थागत सबै विद्यालायमा लागू हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको उनले बताए । विद्यालय प्रवेश र बसमा चढ्नु अगाडि थर्मल गनबाट अनिवार्य तापक्रम नाप्ने, गुणस्तरीय मास्क र सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सकेसम्म बालबालिकालाई बसमा नचढाई अभिभावकले विद्यालय पु¥याउने र विद्यालय परिसरमा साबुनपानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायत अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न निर्देश गरिएको उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीमा कोभिडसँग मिल्ने लक्षण देखिएमा पीसीआर परीक्षणका लागि नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सीमाबाट निरन्तर आवगमन
कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला सीमाबाट आवागमन रोकिएको छैन् । सामान्य निगरानी समेत नगरी प्रवेश दिइएको छ । कोरोना भारतमा तीब्र गतिमा फैलिएको छ । एकै दिन करिव पौने दुई लाख जनामा संक्रमण छ ।
रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाकेको जमुनाह नाकाबाट आउने मानिसहरूको चाप अत्याधिक छ । गत वर्ष यही समयमा भारतबाट आउनेको संख्या बढेपछि नेपालमा कोरोना फैलिएको थियो ।
अहिले दोस्रो चरणको कोरोना देखिएको छ । यो विगतकोभन्दा जोखिमपूर्ण छ । सीमाबाट आउनेलाई निगरानी गर्न नसकिए समस्या थपिन बताइएको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तयारी फितलो देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जोखिममा समेत निकै ढिलाई गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले पहिलेकै अस्पताललाई फेरि सञ्चालनमा ल्याइने बताउँछन् । अहिले संक्रमण देखिनेमा बढी समस्या भेटिएको छ । उनीहरूलाई अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो पटक र्कैयौ विद्यार्थीहरू संक्रमित भएका छन् ।
स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणमा खास काम गरेका छैनन् । पहिले बनाइएका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनहरू बन्द छन् । अब फेरि उस्तै खर्चमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एकै बिहान तीन संक्रमितको मृत्यु
बुटवल । बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका तीन बिरामीको मृत्यु भएको छ । रामनगरस्थित बुटवल धागो कारखानामा रहेको अस्पतालमा उनीहरूको आइसीयुमा उपचार भइरहेको थियो ।
अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ निवासी ७९ वर्षिया महिला, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १ की ७१ वर्षिया महिला र कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ३ का पुरूषको मृत्यु भएको हो ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमका अनुसार तीनै जनाको सोमबार बिहान निधन भएको हो । तिलोत्तमाकी महिला चैत २३ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन । उनमा निमोनिया, दम र ज्वरो देखिएको थियो ।
कपिलवस्तुका पुरूष र अर्घाखाँचीकी महिला चैत २७ गते अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनीहरूमा दम, ज्वरो र निमोनिया देखिएको थियो । पुरूषमा मधुमेह समेत रहेको थियो ।
केही समय सुनसान बनेको बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिले बिरामी बढ्दै गएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कालोबजारी रोक्न सघाउने
आफू बचेर काम गर्न अपील